Redmi Rịba ama 10 enweela ụbọchị mmeghe, ọ bụ Machị 4 | Gam akporosis
Anyị amaworị nke ahụ A ga-emepụta Redmi Rịba ama 10 usoro na Machị, ọnwa na-abịanụ, mana ọ bụghị ụbọchị ahụ kpọmkwem, nke ahụ bụkwa ihe anyị maralarịrị site na ọkwa a na-adịbeghị anya nke Redmi bipụtara site na posta gọọmentị.
Ọ bụ na Machị 4 ụbọchị anyị ga-amata ihe ọhụụ Redmi Rịba ama 10 na ụdị. Bọchị ahụ dị, n'oge e bipụtara isiokwu a, ihe dị ka izu abụọ, nke mere n'oge na-adịghị anya anyị ga-enwe ndị ga-anọchi nke Redmi Rịba ama 9 lineup, nke nweworo ọganiihu zuru oke n'ahịa.
Na Machị 4, anyị ga - ahụ ihe ọhụụ Redmi Rịba ama 10
Ekwuputara ọkwa nke ụbọchị mmalite nke Redmi Note 10 dị ka ụwa, ọ bụ ezie na a ga-eme ihe omume a na India, n'ihi ya, a na-atụ anya na smartphones ga-adị n'ebe ahụ naanị, ọ dịkarịa ala na mbụ. Mgbe ahụ, mgbe ụbọchị ole na ole ma ọ bụ izu gasịrị, a ga-aga ire ere n'ụwa niile.
E kwuru na usoro a ga-abụ ụdị ekwentị asatọ, nke bụ Redmi Rịba ama 10, Rịba ama 10 5G, Rịba ama 10 Pro 4G na Rịba ama 10 Pro 5G. Amaghị ma ọ bụrụ na a ga-ekwuputa njedebe anọ ndị a na Machị 4, mana enwere olile anya na ha ga-ekwupụta.
Qualcomm's Snapdragon 750G ga-abụ chipset processor maka ọrụ ike ha. Enwere ike ịchọta ya n'okpuru ụdị niile, mana nke a ka ga-ahụ. N'aka nke ọzọ, ekwurula na Snapdragon 765G na ntaneti ndị ọzọ, yabụ anyị ga-ahụ nke SoC bụ nke ga-agbanye usoro ọhụrụ ahụ.
Asịrị ndị ọzọ na-egosi na Redmi Rịba ama 10 ga-enwe igwe foto quad nwere ihe mmetụta 108 MP. Nke a bụ ihe ekwuru na akụkọ dị iche iche dịka nkwụsị, ọ bụ ezie na anyị ekwenyebeghị ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Redmi Rịba ama 10 enweela ụbọchị mmeghe, ọ bụ Machị 4
Netwọk mmekọrịta Parler na-arụ ọrụ ọzọ